Roborock dia mamorona indray ny indostria ao amin'ny CES 2022 | Vaovao momba ny gadget
Roborock, orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana ireo mpanadio banga ao an-tokantrano robotika sy tsy misy tariby, naseho androany tao amin'ny Consumer Electronics Show 2022. (CES) ny sainany vaovao, ny Roborock S7 MaxV Ultra. Miaraka amin'ny dock charging marani-tsaina vaovao, ny S7 MaxV Ultra dia ampiasain'ny teknolojia mandroso indrindra an'i Roborock hatramin'izao ho fanadiovana tsara kokoa sy mora kokoa.
Dock charging iray manao izany rehetra izany: Ny fifanarahana amin'ny Roborock Dump, Flush ary Fill Base vaovao, dia manamaivana ny fikojakojana manual ho an'ny mpampiasa. Ny mop dia mikosoka ho azy mandritra sy aorian'ny fanadiovana, miantoka ny S7 MaxV Ultra ho vonona amin'ny hazakazakao manaraka. Manadio ny tenany ihany koa ny fototry ny fiampangana rehefa manasa ny mop ianao, mitazona ny fiantsonana amin'ny toe-javatra tsara. Ankoatr'izay, ny fiasan'ny famenoana rano mandeha ho azy dia ahafahan'ny S7 MaxV Ultra manadio sy mikosoka hatramin'ny 300m2, 50% mihoatra ny teo alohany, raha ny kitapo vovoka kosa mitazona loto mandritra ny 7 herinandro.
Rafitra fisorohana sakana vaovao ReactiveAI 2.0: Miaraka amin'ny fitambaran'ny fakan-tsary RGB, hazavana 3D voarafitra, ary fitaovana fanodinana neural vaovao, ny S7 MaxV Ultra dia mahafantatra tsara kokoa ny zavatra eny amin'ny lalany ary mampifanaraka haingana ny fanadiovana ny manodidina azy, na inona na inona toe-pahazavana. Fanampin'izay, mahafantatra sy mahita fanaka ao amin'ny fampiharana izy io, ahafahanao manomboka manadio haingana ny latabatra fisakafoanana na sofina amin'ny fipihana fotsiny ny kisary ao amin'ny app. Izy io aza dia mamaritra ny efitrano sy ny fitaovana amin'ny gorodona, ary manoro ny fomba fanadiovana mety indrindra toy ny filaharana, ny herin'ny setroka ary ny hamafin'ny fikosana. Ny S7 MaxV Ultra dia nohamarinin'ny TUV Rheinland noho ny fenitry ny cybersecurity.
Miaraka amin'ny teknolojia VibraRise malaza: Namboarina ho an'ny fanadiovana tsy an-kiato, ny S7 MaxV Ultra dia manasongadina ny teknolojia VibraRise® fanta-daza an'i Roborock - fitambaran'ny fikikisana sonika sy mop manangana tena. Sonic fanadiovana scrubs ny gorodona amin`ny mafy mafy mba hanesorana loto; raha ny mop dia afaka manao tetezamita malama amin'ny mifanohitra surfaces, ohatra, dia mitsangana ho azy eo anatrehan'ny karipetra.
Miaraka amin'ny herin'aratra ambony indrindra 5100pa, ny S7 MaxV Ultra dia manolotra fanadiovana lalina kokoa. Ny S7 MaxV Ultra (S7 MaxV robot vacuum cleaner pack sy Emptying, Washing and Filling Base), dia ho hita any Espaina amin'ny vidiny 1399 euros, amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2022. Ny S7 MaxV robot mpanadio banga dia azo vidiana misaraka ihany koa. ho an'ny € 799.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Roborock dia mamorona indray ny indostria amin'ny CES 2022